Tababare Quique Setien Oo Warkii Ugu Waynaa Ka Sheegay Xidigaha Kooxdiisu Doonayso Ee Miralem Pjanic & Lautaro Martinez-Muxuu Ka Yidhi Neymar, Arthur & Vidal? - Gool24.Net
Tababare Quique Setien Oo Warkii Ugu Waynaa Ka Sheegay Xidigaha Kooxdiisu Doonayso Ee Miralem Pjanic & Lautaro Martinez-Muxuu Ka Yidhi Neymar, Arthur & Vidal?
Tababaraha kooxda Barcelona ee Quique Setien ayaa warkii ugu waynaa ka sheegay xidigaha kooxdiisa Barcelona doonayso ee Miralem Pjanic iyo Lautaro Martinez kuwaas oo la cadeeyay in ay Camp Nou iman doonaan dhamaadka xili ciyaareedkan.
Quique Setien ayaa si wayn u amaanay xidigaha kooxdiisa Barca la soo saxiixanayso ee Pjajic iyo Martinez wuxuuna xaqiijiyay sababta dhabta ah ee ay maamulka kooxdiisa labadan xidig ula soo wareegayaan.
Hadalka Quique Setien ayaa xaqiijin buuxda u ah xiisaha kooxdiisa Barcelona iyo sida uu labadan xidig ugu xisaabtamayo xili ciyaareedka cusub ee soo socda.
Waraysi xiiso badan oo uu bixiyay Quique Setien oo aanu is adkayd iyo difaacasho isku dayin ayuu ku xaqiijiyay in tayada labadan ciyaartoy tahay sababta dhabta ah ee ay u doonayaan wuxuuna muujiyay sida ay wax ugu soo kordhin karaan Camp Nou marka heshiiskooda la dhamaystiro.
Dhinaca kale Setien ayaa wax laga waydiiyay xaalada mustaqbalka Arthur Melo kaas oo hore loo sheegay in Juventus ay doonayso in uu qayb ka noqdo heshiiska Maralem Pjanic.
Waxa kale oo uu Setien shaaciyay in uu jeclaan lahaa in uu tababare u noqdo xidiga sida wayn loo saadaalinayo in uu xagaagan Barca ku soo laaban doono ee Neymar Jr.
Tababare Quique Setien oo ka hadlaya saxiixa kooxdiisu ku doonayso Lautaro Martinez ayaa yidhi: “Waxaa dhamaantayo noo cad in afar ama shan ciyartoy ay jiraan kuwaas oo booskiisa ka ciyaari kara kuwaas oo ah kuwo aan caadi ahayn isla markaana uu mid kasta oo ka mid ahi uu leeyahay wixii uu Barcelona ugu ciyaari lahaa”.
Setien oo si gaar ah uga sii hadlaya Lautaro Martinez ayaa yidhi: “Iyada oo ciyaartoygan la tixgalinayo, isagu waa ciyaartoy kaas oo awood u leh in uu aad kooxdan ugu fiicnaan karo, si fiican ayuu kooxdan ugu shaqayn karaa si la mid ah kuwa kale ee laga yaabo in ay heerkiisa yihiin”.
Quique Setien ayaa wax laga waydiiyay haddii Arthur Melo uu qayb ka noqon doono heshiiska uu Miralem Pjanic ku imanayo Barcelona iyo hadalkii uu Arthur ku xaqiijiyay in uu Barcelona sii joogi doono wuxuuna yidhi: “Haddii uu isagu taas sheegay, xaqiiqdii ma jirto wax aan ka sheegayo mustaqbalka ciyaartoyga. Waxaan aad diirada u saarayaa shaqada naga horaysa”.
“Waxaan u baahan doonaa dhamaan ciyaartoydayda, sababtoo ah ma ogin duruufaha iyo sida ay horumar u samayn doonaan marka tartanku dib u bilaamo. Anigu qof kastaba waan ku xisaabtamayaa, waxaanan rajaynayaa in qof kastaaba uu bandhigooda ugu fiican ku samayn doono 11 ka kulan ee baaqiga noo ah” ayuu Setien hadalkiisa raaciyay.
Dhinaca kale Setien ayaa ka hadlay Miralem Pjanic wuxuuna yidhi: “Anigu markastaba waan jecelahay dhamaan ciayartoyda sidaas u fiican. Pjanic waa ciyartoy fiican, inkasta oo ay sidoo kale jiraan ciyaartoy kale oo fiicani oo aanu maalin kastaba ku arkayno wargaysyada”.
Setien ayaa wax laga waydiiyay Arturo Vidal oo la filayo in uu booska u banayn doono Pjanic wuxuuna yidhi: “Xaqiiqdii isagu waa ciyaartoy tayo fiican leh isla markaana tamar fiican keena.Bandhig ahaan iyo dhaqan ahaan waa ciyaartoy fiican, waxaananu ku faraxsanahay in aanu isaga haysano”.
Ugu danbayn Setien ayaa ka jawaabay su’aal Neymar Jr laga waydiiyay wuxuuna yidhi: “Waxaan jeclaan lahaa in aan maalin uun tababare u noqdo isaga maadaama oo uu yahay ciyaartoy heer sare ah. Daacad ahaantii, waxaan fuliyay riyada tababarista Messi, laakiin xaqiiqdii waan ku faraxsanaan doonaa haddii uu Neymar nagu soo biiro”.
In Setein aanu ka gaabshan su’aalaha laga waydiiyay Martinez iyo Miralem Pjanic waxay muujinaysaa kalsoonida uu ku qabo in ay kooxdiisa Barcelona ku soo jeedaan kadib markii la sheegay in Barca ay heshiisyo la meel dhigtay kooxaha Juventus iyo Inter Milan.